Chii Chinosimudza Pane An iPhone & Ini Ndinoishandisa Sei? Hechino Chokwadi! - Iphone
maitiro ekubatidza yako imessage
zvinorevei kuti chishongedzo ichi hachigone kutsigirwa
iphone chete inoratidza apple logo
umhutu kuruma mavanga pamakumbo
foni yangu haichajaji pandinoiisa mukati
Chii Chinosimudza Pane An iPhone & Ini Ndinoishandisa Sei? Chokwadi!
Uri kuyedza kuverenga iyo yakadhindwa yakadhindwa pane yakakosha gwaro, asi iwe unenge uine zvishoma zvakaoma. Chishandiso cheApple cheMagnifier chinokutendera kuti utarise zvakanyanya zvinhu zvaunonetseka kuona. Muchikamu chino, ini ndichapindura mubvunzo, 'Chii Chinokudziridza pane iPhone?' , pamwe nekukuratidza maitiro ekushandura Magnifier uye maitiro ekuishandisa!
Chii Chinosimudza Pane An iPhone?
Magnifier chishandiso Chekushandisa chinoshandura yako iPhone kuita girazi rinokudza. Magnifitera anonyanya kubatsira kune vasina kuona, avo vanogona kunetseka kuverenga zvinyorwa zvidiki mubhuku kana kabhuku.
Iwe unokwanisa kuwana Magnifier mune iyo Zvirongwa app, kana nekuiwedzera iyo kuControl Center kana yako iPhone iri kuita iOS 11.
Maitiro Ekubatidza Magnifier Mune Iyo Zvirongwa App Pane iPhone
Vhura iyo Zvirongwa app.
Tinya Kuwanika .
Tinya Magnifier .
Tinya switch padivi Magnifier kuibatidza. Iwe uchaziva kuti switch iripo kana iri green.
Kuvhura Magnifaya, tinya katatu bhatani reKumba bhatani.
Maitiro Ekuwedzera Magnifier Kudzora Center Pane An iPhone
Kutanga nekuvhura iyo Zvirongwa app.
Tinya Kudzora Center .
Tinya Gadzirisa Kudzora , iyo inotora kuControl Center maitiro ekugadzirisa menyu.
Bhura pasi uye tinya bhatani rebhuruu pamwe chete padyo ne Magnifier kuiwedzera kuControl Center.
Mashandisiro Ekushandisa Magnifier Pane An iPhone
Iye zvino zvawachinja Magnifier muApp yeapps kana kuiwedzera kuControl Center, inguva yekukudza. Katatu-tinya bhatani reKumba kana iwe ukabatidza Magnifier mune iyo Zvirongwa app, kana tora iyo Magnifier icon muDirect Center kana iwe wakazviwedzera ipapo.
Paunoita, iwe uchaendeswa kuMagnifier, iyo inotaridzika yakafanana neiyo Kamera app. Iwe uchaona zvinhu zvikuru zvitanhatu:
Kuonekwa kwenzvimbo iyo yako iPhone iri kuwedzera mukati.
Slider inokutendera kuti usvitse mukati kana kunze.
Mheni bhaudhi icon iyo inoshandura iyo flash on uye off.
Iyo yekuvharira icon inoshanduka kuita yero kana uchinge wasarudza nzvimbo yekutarisisa.
Nhatu dzakatenderedza denderedzwa muzasi kurudyi-kona yekona, iyo inokutendera iwe kugadzirisa marara uye kupenya marongero.
Bhatani rakatenderera, iro raunogona kudzvanya kutora 'pikicha' yenzvimbo yauri kukudza.
Ongorora: Nechekuita, uyu mufananidzo hauna kuchengetwa kuApp photos pane yako iPhone.
Maitiro Ekuchengetedza SaMufananidzo Unotorwa Uchishandisa Magnifaya
Dhinda bhatani bhatani muMagnifier kutora pikicha yenharaunda.
Neimwe munwe, pinda uye bata chero nzvimbo yemufananidzo.
Menyu diki ichaonekwa, ichikupa sarudzo kune Sevha Mufananidzo kana Goverana .
Tinya Sevha Mufananidzo kuchengetedza mufananidzo kune iyo Mifananidzo app pane yako iPhone.
Ongorora: Mufananidzo wacho hausi kuzoponeswa sezvazvinoonekwa muMagnifier. Iwe unofanirwa kuswededza mukati pamufananidzo muApp Photos.
Maitiro Ekubatidza On Flash Mune Magnifier Pane An iPhone
Kungofanana neKamera app, unogona kubatidza flash muMagnifier kuti ujekese nzvimbo yaunoda kunyatso tarisa. Chekutanga, vhura Magnifaya muControl Center kana nekudzvanya katatu bhatani reKumba.
Ipapo, tinya bhatani bhatani (tsvaga mheni bhaudhi) mukona rezasi reruboshwe rekona. Iwe uchaziva kuti flash iripo kana iyo flash bhatani rinoshanduka kuita yero uye mwenje kumusana kwe iPhone yako unotanga kupenya.
Maitiro Ekutarisa Mune Magnifier Pane An iPhone
Iwe unogona zvakare kutarisa kune yakatarwa nzvimbo muMagnifier, sezvaungaita iwe muKamera app. Kuti uite izvi, tinya nzvimbo yeiyo skrini yaunoda Magnifier kuti itarise pairi.
Chikamu chidiki, cheyero chinowoneka muchidimbu munzvimbo yawakabaya uye bhatani rekuvhara pazasi pechiratidziro che iPhone yako rinozoita yero.
Maitiro Ekugadzirisa Ruvara Uye Kupenya Zvirongwa Mune Magnifier Pane Yako iPhone
Kugadziridza ruvara uye kupenya muMagnifier kunogona kuita kuti mifananidzo yaunotora itarise chaizvo, zvinotonhorera chaizvo . Kune akatiwandei marongero akasiyana uye maficha, uye isu tinotsanangura zvishoma muchidimbu chimwe nechimwe chazvo. Kuti uwane izvi marongero, tinya izvo zvitatu zvinopindirana mukona rezasi rerudyi rekona. Iwe uchazoziva iwe uri mune chaiyo menyu kana bhatani inoshanduka yero.
Kutsanangura Iyo Magnifier Kupenya Uye Ruvara Zvirongwa
Iko kune maviri akatsvedza uye akati wandei mafirita emavara aunogona kushandisa muMagnifier. Tinokurudzira kutamba uchitenderedza nezvinhu izvi iwe nekuti, mumaonero edu, mufananidzo unokodzera zviuru zvemazwi! Heino mutsara unokurumidza kana maviri nezve yega yega maseteni:
Inotsvedza padhuze ne icon yezuva inogadzirisa kupenya. Kuenderera mberi iwe uchikwevera ichi chinotsvedza kurudyi, iyo inopenya iyo Magnifier mufananidzo inova.
Denderedzwa iri hafu nhema nehafu chena inogadzirisa marongero madema uye machena.
Iyo icon iri muzasi-kuruboshwe kona yekona nemiseve miviri nezvikwere zviviri inverts mavara emufananidzo.
Pamusoro pemupepeti kupenya uye kuisa marara mukukudza, iwe uchaona akawanda akasiyana mafirita emara. Unogona swipe kuruboshwe kana kurudyi kuyedza imwe marongero eruvara. Pasi pazasi, iwe uchaona mufananidzo wandakagadzira uchishandisa Magnifier pane iPhone.
Magnifier Pane An iPhone: Yakatsanangurwa!
Iwe uri pamutemo nyanzvi yeMagnifier uye hauzotambure kuyedza kuverenga zvinyorwa zvidiki zvakare. Iye zvino zvaunoziva chinonzi Magnifier uye maitiro ekuishandisa pane iyo iPhone, ita shuwa yekugovana ichi chinyorwa pasocial media neshamwari dzako uye nemhuri! Kutenda nekuverenga, uye unzwe wakasununguka kutisiira komendi pasi pazasi.